Fambolen-kazo : NAHATANTERAKA NY ADIDINY NY HVM -
AccueilRaharaham-pirenenaFambolen-kazo : NAHATANTERAKA NY ADIDINY NY HVM
21/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notanterahina omaly, tany Anjeva, ny fambolen-kazon’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM). Tsy araka ny noeritreretina ireo olona nazoto nanohana ny antson’ity antoko manohana ny fitondrana ity.
Saika nahitana solontena avokoa mantsy ireo HVM avy amin’ireo faritra maro eto Madagasikara. Nandray ity hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fambolen-kazo ity ny Faritra Analamanga. Tonga nanotrona sy nanohana ny hetsika amin’ny maha olom-pirenena manana andraikitra sy adidy amin’ny firenena ireo olom-panjakana maro, toa ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Honoré Rakotomanana, ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy, ireo minisitra sasantsasany, ireo solombavambahoaka, ireo olom-panjakana ambony ary ireo vahoaka mahatsiaro ho manana adidy amin’ny tanindrazana.
Nambaran’ny minisitry ny Tontolo iainana, Ndahimanajara Johanita, tamin’izany fa mihasimba ny tontolo iainana ary mahatonga ny fiovaovan’ny toetr’andro ankehitriny. “Noho izany, mahatsiaro manana adidy amin’ny firenena izahay ary mampirisika ny rehetra tsy ankanavaka handray ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy ho fitiavan-tanindrazana”, hoy ity minisitra ity.
Nanao antso avo kosa tetsy ankilany ny filoha nasionalin’ny HVM, ny minisi-panjakana misahana ny fambolena, Rivo Rakotovao, fa tokony hahatsiaro tena amin’ny fanajanonana tsy misy hatak’andro ny fanaovana tavy sy fandoroana tanety.